Mgbali Mgbasa - Tanzania Crusher
Tanzania Crusher>>igwe nkuku nkume>> Mgbapụta Mmetụta
Mgbanwo Mmetụta, Shanghai XSM bụ ngwá ọrụ kuki crusher, Mgbapụta Impact, ngwá ọrụ na-arụ ọrụ nke ígwè, ndị na-emepụta ihe igwe na-ebugharị ígwè.Ore mining process, the first belt ebu, onye na-enye nri ọkụ, ihe eji ebu oku ezigara ya nkuku uhie, nkpọchi mmetụta, nnyeghari hydraulic bụ ihe na-eme ka a ghara ikpuchi ya, nke abụọ nke a obere jawcrusher, ihe na-esi ísì nyochaa nke atọ nke atọ na-ekpuchi jijiji na ihuenyo gbakwunyere nkọwa zuru oke nke ore ahụ na-eburu ya igwe mgbidi, igwe na-edozi Ngwọta nlekọta ọgwụ dị mma ndị na-arụ ọrụ magnet, igwe onu mmiri họrọ ọtụtụ ụdị mkpa ọ bụla. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe a, ọ bụ naanị ọrụ nhazi ọ bụla, Shanghai XSM dabere n'ụdị ụdị gị bụ ngwá ọrụ m kachasị mma, Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, anyị ga-akpọtụrụ anyị ma ọ bụ pịa aka nri akụkụ nke akara ngosi akara, ndị ọrụ anyị na-ahụ maka ịchọrọ gị azịza zuru ezu.
Ngwongwo ihe na-emetụta ihe dị iche iche bụ ụdị ọhụrụ nke ngwá ọrụ ndị na-akụda aka. Nkume a na-agụnye sulu mmiri, mmetụta nke efere, ihe nkedo ụkwụ, sụgharịa, na ihe oriri na ntanetị. Ngwunye kpochapịa nke na-emetụta ya bụ nke kwesịrị ekwesị maka ịkụtu ihe na oke nha nke ọ bụghị karịa 300mm na ike mkpali nke ihe karịrị 350 MPa. Ọ nwere ike ịkụpịa ihe niile siri ike, ịbụ ezigbo ngwá ọrụ maka ikpochapu nke abụọ. Ihe ndị a kpochapụrụ egosiputa nke nwere cubic udi dị iche iche.
Mgbalị Ngwá Agha Mgbalị na Atụmatụ
1.Large n'ọdụ ụgbọ mmiri, ụlọ miri emi na-egbuke egbuke, njedebe dị elu (20: 1).
2.Non njikọ njikọ, nghazi ngwugwu, arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya, ọrụ dị mfe, nhazi dị mfe.
3.High-chrome na-egbugbere ọnụ, na-eguzogide mgbochi, mmetụta dị ike, ogologo ndụ.
4.The ọdịiche dị n'etiti mpempe akwụkwọ mmetụta na okpokoro ala dị mfe na-adị mfe ịhazi, ya mere a na-achịkwa nha nke ọma.
Nkà na ụzụ nkọwa nke Mgbasa Mmetụta
(Mm) Nri Ibu Mmalite
(Mm) Max. Nri Ogologo
(t / h) Motor ike
(KW) Ebu ibu (t) n'ozuzu Dimension
Rịba ama: Nkọwapụta a bụ naanị ntụpọ, mgbanwe ọ bụla na-edo onwe ya n'okpuru ngwaahịa mmepụta ihe.
Ụkpụrụ Ọrụ Ngwá Agha Mgbalị
Mgbasa iku ume gụnyere mmetụta iji kpochapụ ihe onwunwe. Mgbe ọ na-arụ ọrụ, ọkwọ ụgbọala nke ụgbọala ahụ na-ebugharị na-agba ọsọ ọsọ ọsọ, ya na eriri nke dị na rotor jikọtara ya na ihe ahụ e tinyere na ya, emesia ihe a na-atụba na ihe ntanetị ahụ iji ghọta ịkụgharị ọzọ. Na ihe a na-atụba ugboro ugboro na mpempe mmetụta ọ bụla, a na-emegharị ihe na ụlọ ahụ nwere mmetụta, a ga-ewepụkwa ihe ahụ mgbe a chọrọ ogo ahụ. Enwere ike gbanwee nha na ọdịdị nke ihe a ga-agbapụta site n'ịgbanwe ọdịiche dị n'etiti ikpu mmetụta na rotor rack.
← Nwunye Mgbapụta
PE Egwuregwu Ngwá Agha Maka Sale →